Antara Politik Ketakutan dan Politik Harapan
The social contract is ours to create by Commander (Rtd) S THAYAPARAN, formerly of the Royal Malaysian Navy
What Every Woman Expects and Gets
ကျောက်တော်မြို့ တွင် ၇ခိုင် အကြမ်းဖက် သမားများကို လက်နက်များနှင့် အတူဖမ်းဆီးမိခြင်း
Eh eh..jom cuba..
Uollsss jangan terperanjat uollssss...<br><br>Kenapa semua post kak
Posted: 28 Nov 2012 09:16 AM PST
Posted: 28 Nov 2012 09:14 AM PST
But she had sold one parcel for RM2 million in cash andaRM16 million overdraft facility ina"joint-venture" with another company specialising in plasticware, prompting the carpet dealer to putacaveat on the land in Bukit Raja and lodgeapolice report last July.
"This is my land... I want to develop it," Deepak told The Malaysian Insider, hours after he spoke to several other news portals about the matter.
"We want her to sign over the power of attorney for the land... but she hasn't," Deepak said.
He also found out last July that Awan Megah has signeda"joint-venture agreement" with Guppyunip Sdn Bhd on July 9, 2010 to develop one of the parcels he had bought.
"I am unsure if she has sold the same piece of land to others too," he said, adding he hoped the police would get to the bottom of the case ~ The Malaysian Insider
Posted: 28 Nov 2012 09:12 AM PST
Posted: 28 Nov 2012 09:05 AM PST
Kenyataan DS Shahrizat Jalil yang, serupa apa disebut Tun Dr Mahathir, berusaha untuk menakut-nakutkan rakyat menunjukan sifat sebenar lagi hakiki sebuah rejim yang semakin hari semakin nazak. Sebagai seorang pemimpin, beliau seharusnya menunjukkan teladan yang baik dengan membincangkan masa depan yang cerah buat semua dan bukannya mengeluarkan kata-kata ancaman bahawa akan berlaku sengketa perkauman 13 Mei demi menyelamatkan UMNO.
Nada DS Shahrizat yang begitu cemas memikirkan apa yang berlaku jika Pakatan Rakyat memenangi tampuk pimpinan negara pada PRU13 nanti turut membuktikan betapa beliau tidak memahami dan tidak mengenali suara hati para pengundi, terumanya rakyat Malaysia yang sudah celik politik dan punyai keinginan kuat untuk berubah.
Pakatan Rakyat tekad pada perubahan dan agenda reformasi melalui proses demokrasi, dan akan berusaha untuk memperkukuh dan memperkasa sistem demokrasi pilihan raya di Malaysia. Oleh itu, saya tidak segan mengulangi kata-kata Dato' Ambiga Sreenevasan: "Kami mahu perubahan melalui peti undi, jika perubahan tiba."
PAU UMNO 2012 menunjukkan bahawa rakyat perlu memilih antara Politik Ketakutan yang dijulang UMNO dan Politik Harapan yang diperjuang Pakatan Rakyat, demi Malaysia yang lebih baik. Dan satu-satunya cara untuk membuktikan UMNO tidak takut mahupun panik dalam hari-hari menjelang PRU13 ini adalah dengan Presiden UMNO berdebat dengan Dato' Seri Anwar Ibrahim.
DS Shahrizat Jalil's echoing of Tun Dr Mahathir's scaremongering reveals the real and true nature ofadecaying regime. Instead of showing leadership and focusing on the future, we are reminded that the possible spectre of communal violence of 13 May will be 're-staged' to saveamoribund UMNO.
Shahrizat's panic-stricken message in the event ofaPakatan Rakyat 13GE win demonstrates her outright disconnect with voters, especially those Malaysians' with the political wisdom and desire for change.
Pakatan Rakyat is committed to change and the reform agenda through the democratic process, and will strive to protect and strengthen Malaysia's electoral democracy. As such, I wish to repeat Dato' Ambiga Sreenevasan's call: "We want to bring change through the ballot box, if there is to be change at all."
The UMNO 2012 AGM proves the following point: The rakyat must choose between UMNO's Politics of Fear and Pakatan Rakyat's Politics of Hope forabetter Malaysia. And the only way to disprove that fear and panic has truly descended on UMNO, is for the UMNO President to immediately debate with Dato' Seri Anwar Ibrahim.
Posted: 28 Nov 2012 06:27 AM PST
"Malahan kementerian tersebut masih boleh memberikan arahan sekarang, siapa yang kawal sekarang?" soal Musa.
"Kamu baca akhbar. Kadangkala, kamu dengan (ahli politik berkata) "Saya arahkan polis buat itu... buat ini," jawab Musa apabila ditanya bentuk arahan yang diberikan kepada KPN ketika ini.
Posted: 28 Nov 2012 04:04 AM PST
"Our masters have not heard the people's voice for generations and it is much, much louder than they care to remember." - Alan Moore (V for Vendetta)
COMMENT At the recent homophobic and Anwar Ibrahim-bashing Himpunan Barisan 1Malaysia, the nebulous "social contract" was dusted off and likeareal document (which it is most certainly not), used to plead the Umno case.
University Sains Malaysia associate professor P Sivamurugan (right) sycophantically counseled that "this social contract must be strengthened for greater improvement," and to add to his rather disingenuous diatribe linking criticisms of the so-called social contract toamisunderstanding of the constitution, he weaseled in "it is up to majority who do (understand), to defend the constitution". All I can say is I hope right-thinking Malaysians don't shun (as per Sivamurugan's advice) those critical of the social contract and its willful conflation with the Malaysian constitution (by academics such as him), people like Mavis Puthucheary. who was formerly associate professor in Universiti Malaya's Faculty of Economics and Administration, and who wrote 'Malaysia's Social Contract - Exposing the Myth Behind the Slogan'.
The central thrust of her argument is encapsulated (in my opinion) in two quotes which I reproduce here. The first: "Central to the narrative of the inter-ethnic bargain is the power-sharing arrangement in which the leaders of the political parties of the Alliance government set out the rules for the sharing of the nation. Nation-building was based on the theme of the making and sharing of nation among its multi-ethnic citizens withinaframework which entails the maintenance of the special position of the Malays. It was clear that at the heart of the debate was the issue of power-sharing between the two main ethnic groups, Malays and non-Malays, withinademocratic framework."
"In the first 10 years after Independence, the balance of power between the two main parties, Umno and the MCA, was more or less equal. After 1969, however the balance of power within the ruling coalition shifted significantly in favour of Umno and the political system itself became less democratic. Although both parties fared badly in the 1969 elections, Umno leaders who had secured control of the government concentrated their efforts on regaining Malay support while still maintaining the power-sharing structure. With the introduction of the New Economic Policy and the extension of Malay privileges especially in the fields of education and employment, Umno regained its popularity among the Malays and consequently assumedadominant position in the ruling coalition."
A fool's endeavour
'Malays' of course in this context should include the phenomenon of constitutionally-created Malays and the exclusion of the other bumiputeras - Orang Asli/the indigenous people of Sabah and Sarawak which would skewer the demographic and make the concept of 'Ketuanan Melayu' as redundant as 'Ketuanan Bumiputera' although the latter would at least have some element of honesty in it. All of which makes PKR's and PAS' reassurances to the 'Malay' community, that as the "majority" they would benefit the most under an affirmative action programme rather problematic, but I digress.
Another person who should not be shunned these days but is by Pakatan partisans, is blogger Raja Petra Kamarudin (RPK). In his seminal 'You want to know about the Social Contract? Okay, let's study history' blog posts, he took up Puteri Umno human resources bureau chief Fahariyah Md Nordin suggestion to BN leaders to "educate" the young who are 'ignorant" of history. This being RPK, over the course ofafew days he released the entire 33-page Reid Commission's report and recommendations which led to the creation of Malaya and is most connected with the so-called social contract. RPK also had the good sense to quote former prime minister Dr Mahathir Mohamad who conceded that the social contract did not exist in written form but wasaverbal contract. All of this makes "strengthening" itafool's endeavour.
Let us assume that the social contract is notafigment of Umno imagination but rathera"verbal" (sic) contract negotiated and agreed to (by the ethnic power groups of the time) which has been altered over the decades by Umno. Where do we go from here?
In the same event, Just World Movement president Chandra Muzaffar who shared the stage with perennial virgin Umi Hafilda Ali and butt dancer extraordinaire Mohd Ali Baharom (sheesh, if you judgeaman by the company he keeps...) asked, "What does the other side have?" Well, I may have an answer to that. What the other side offers isanew social contract. What terrifies Umno is that this isasocial contract not based on appeasement or gratitude. It is notasocial contract that overtly alleviates one ethnic group over the others. It is notasocial contract that demands obedience in return for peace. It is notasocial contract brokered in secret in our names for the division of power although the division of power is intrinsic in this new social contract.
It is not evenaverbal contract. It is more of an unspoken understanding. This understanding extends to the realpolitik of Malay rule because of their "majority" status. However this understanding is cognisant of the compromise that Malay rule does not mean Malay superiority. This understanding openly acknowledges the tensions that arise out ofamultireligious country having as its backboneafundamentalist Islamic party asapossible governing party.
The numerous skirmishes over the role of Islam in the alternative alliance is evidence that unlike the social contract of Umno, where Islam was used asatool to divide the country, Islam in this social contract isatool which would determine if the concepts of rights is applicable to all or if Muslims would be forever segregated from the rest of their countrymen.
In other words, the nature of the discourse when it comes to Islam is different. No longer are the non-Muslims who subscribe to this social contract afraid to voice their concerns when it comes to Islam intruding into their lives. There may be the "separate but equal" camp but there is alsoagrowing movement which understands that the people most affected by Islam are the Muslims themselves and that freedom of interpreting one's religion should bearight extended to all. It is an understanding ofasizeable section of the voting public in its support ofadisparate group of political parties divided along racial and religious lines pursuing the ideal of good governance and accountability asaroute to peace and stability. and not the old social contract which emphasised unequal racial power-sharing asameans to sustain tolerance and economic co-dependency.
This social contract wasalong time in the making and perhaps found expression in the political tsunami of 2008. However unlike the Rukunegara which is only paid lip service, this social contract, our social contract, is aspiration turned into action when we take to the streets in support of Bersih, or Hindraf or vernacular school education or the recent Himpunan Hijau march. It is an expression of voluntary participation for goals that would benefit society and not necessarily political parties. It isanew phenomenon in Malaysian society where people shrug of their empathy and march for what they believe in.
It is notasocial contract that has coverage in the press or is explicitly expressed by opposition leaders. It is notasocial contract which we are told binds us but ratheracontract that is instinctively embraced byacertain section of the electorate of their own free will. It isasocial contract that means different things to different people but at its core isabelief that mutual cooperation in the face of diversity isaway out of the racial and class quagmire that Umno and its social contract has bestowed us.
It is there in the forums where race, religion or rule of law is debated and which is predictably used by the current regime as propaganda characterising those who attend as unpatriotic. However, like most contracts of this kind, it is flawed. At times, it is myopic. At times, it relegates principle to the backburner in favour of political expediency. At times, it is racist even though it claims inclusiveness. At times, it is hypocritical in the way how it views the conduct of Umno and Pakatan.
The good news is that it isawork in progress unlike the Umno social contract, which isasword of Damocles that hangs over our heads. Its virtue is that it will continue evolving as long as those who subscribe to it mature politically. Time is on this social contract's side.
Chandra (left), this is the social contract of the "creatures" you wish the majority would reject. I think this is the greatest gift the political tsunami has given to future generations of Malaysians.
Or maybe I am wrong. Maybe Umno-BN isavirulent strain of chlamydia and Pakatan isastrong dose of Azithromycin. Malaysiakini
Posted: 28 Nov 2012 03:05 AM PST
"ရိုဟင်ဂျာ" | ဌေးလွင်ဦး
မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အစွန်းရောက်များနဲ့ မျက်ကန်း အမျိုးသားရေးဝါဒီများ ဇွတ်ခံငြင်းနေတဲ့ အမည်နာမ "ရိုဟင်ဂျာ" ကတော့- ကမ္ဘာ့ဇတ်ခုံပေါ်မှာ မင်းသားနေရာက ဖြစ်နေပါပြီ။ "ရိုဟင်ဂျာ" ဆိုတဲ့ အမည်နာမကို ငြင်း ဆန်သူတိုင်း- ကမ္ဘာအလည်မှာ လူယုတ်မာ အဖြစ်၊ အကြမ်းဖက် လူသတ်တရားခံအဖြစ်၊ ကမ္ဘာ့လူသားတို့ရဲ့ အော့နှလုံးနာစရာ လူသား အဖြစ်- ထင်ထင်ရှားရှား အရောင်ပေါ်လာပါတော့တယ်။တစ်ကယ်လည်း ရိုဟင်ဂျာက ရိုဟင်ဂျာပါပဲ။ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ- ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတိုင်းမှာ ပျံ့နှံ့နေသလို- မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူမျိုးတိုင်းကြားမှာလည်း အနည်းနဲ့အများ ရှိနေပြီးသား ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါဟာလည်း ရိုဟင်ဂျာတို့အား မတော် မတရား ဖိနှိပ်ညှင်းပန်း သတ်ဖြတ် မောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒီ စစ်အာဏာရှင် အဆက်ဆက်တို့ရဲ့ ကျေး ဇူးကြောင့်လို့ ပြောရမှာပါ။
ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ ဘယ်ဆီကိုရောက်ရောက်- သူတို့ကိုယ်သူတို့ "ရိုဟင်ဂျာ" လူမျိုးဆိုတဲ့ နာမည်ကို ခုံခုံမင်မင်နဲ့ ဖက်တွယ်ပြီး ရပ်တည်နေပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ သားသမီးတွေက ပြင်သစ်စကား၊ ဂျာမဏီစကား၊ စပိန်စကား၊ နော် ဝေးစကား၊ အင်္ဂလိပ်စကား၊ အူရ်ဒူစကား၊ ဟင်ဒီစကား၊ ဘန်ဂါလီစကား၊ မလေးစကား၊ ထိုင်းစကား၊ အာရဗ် စကား- စတဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတိုင်းရဲ့ ဘာသာစကားများနဲ့ ကြီးပြင်းခဲ့ရပေမယ့်- သူတို့ကိုယ်သူတို့ "ရိုဟင်ဂျာ" ဆိုတဲ့ ဂုဏ်နဲ့ပဲ ရပ်တည်နေပါတယ်။ နိုင်ငံကြီး အတော်များများမှာ ပညာတတ်တွေ၊ ပညာရှင်တွေ၊ ကြေးရည်တတ် တွေ၊ ငွေရှင်ကြေးရှင်တွေ- လူရာဝင်သူတွေ အများကြီး ရှိနေခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကိုယ် သူတို့ "ရိုဟင်ဂျာ" လူမျိုး ဆိုတဲ့ ဂုဏ်နာမနဲ့ပဲ ရပ်တည်နေကြပါတယ်။
အကယ်၍ သူတို့ဟာ မြန်မာ အယူသည်း မျက်ကန်းများ စွပ်စွဲသလို ဘင်္ဂလီ လူမျိုး ဖြစ်ခဲ့မယ် ဆိုရင်- သူတို့ ရောက်ရာ နိုင်ငံတိုင်းမှာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဘန်ဂါလီလို့ ခံယူပြီး အခြားသော ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် လူမျိုးများနဲ့ ရော နှော ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့မှာ သေချာတယ်။ အနီးစပ်ဆုံး ထိုင်းနိုင်ငံကို ကြည့်ပါ။- ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် မြို့ မဲဆောက်မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတန်းလျှား ဆိုတဲ့ မွတ်ဆလင်အများစု နေထိုင်ရာ ရပ်ကွက်တစ်ခုရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီရပ်ကွက်မှာ နေထိုင်တဲ့ လူတွေက ရခိုင်နယ်က လာတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ မဟုတ်ဘူး။ မဲဆောက်မှာ ရှိနေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေက သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဘင်္ဂလီလို့ မခံယူဘဲ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုပြီး သီးခြားရပ်တည်နေတယ်။ သူတို့ကို တစ်ခြားသူတွေက အာရ်ကန် လို့ ခေါ်ကြတယ်။ (အာရ်ကန် Arakan ဆိုတာ ရခိုင်နယ်ရဲ့ သမိုင်းစဉ်ဆက် အမည်နာမ ဖြစ်ပါတယ်။ Rakhine လို့ စတင်ခေါ်လာခဲ့တာ- ၁၉၉၀ နောက်ပိုင်း စစ်အစိုးရလက်ထက်မှ အမည် ပြောင်းလိုက်ခြင်းပါ။ မြန်မာလို ရခိုင် ပြည်နယ် ဆိုတာကတော့ ဦးနေ၀င်းလက်ထက် ၁၉၇၅ ခုနှစ်မှ စတင်ခေါ် ခဲ့တာပါ။)
မလေးနိုင်ငံမှာလည်း "ရိုဟင်ဂျာ"တွေက ဘင်္ဂလီနဲ့ သီးခြား ရပ်တည်ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလည်း သီးခြား ရပ်တည်ပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့ ရိုဟင်ဂျာ တွေသာ ဘင်္ဂလီ ဖြစ်နေရင်- နိုင်ငံရပ်ခြား လွတ်လပ်ရာ နိုင်ငံတွေမှာ ရောသွားလောက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ "ရိုဟင်ဂျာ" ဆိုတာ အမည်နာမအားဖြင့် ထိန်ချန် ဖျောက်ဖျက်ခံထားရတဲ့ အမည်နာမသာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေကိုတော့ ဘယ်လိုမှ ဖျောက်ဖျက်လို့ မရသေးလို့ ကျန်နေတာ သေချာပါတယ်။ အဲ့ဒီ ရိုဟင်ဂျာ လိုတဲ့ လူသားတွေက အစ္စလာမ်သာသနာကို ကိုးကွယ်လို့ ဘာသာရေး အရ နှိပ်ကွပ်နေခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို မြန်မာအစိုးရက ဘယ်လိုလိမ်လိမ် ကမ္ဘာက သိနေပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာများက ရခိုင်နယ်မှာ သမိုင်းမှတ်တမ်းအရ ရှေးအကျဆုံး လူမျိုးနွယ်စု ဖြစ်ပါတယ်။ (သမိုင်းမတွင်မှီ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း လေးထောင်ကျော်ကို မသိပါ။) ဒီအတွက် ကျွန်တော်ရေးတဲ့ ဆောင်းပါးတိုင်းမှာလို ဖေါ်ပြ ပြီး၊ သက်သေပြပြီးလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီရှေးကျတဲ့ လူမျိုးစုဟာ- မာဂဓ အင်ပါယာတွင်းမှာ သူတို့ကိုလွှမ်းမိုးရာ ဟိန္ဒူဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာများကို ကူး ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကို လွှမ်းမိုးရာ ရှေးဟောင်း မာဂဓခေတ်သုံး ဘင်္ဂလီစကားနဲ့ စာပေကို သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း အစ္စလာမ်သာသနာ ရောက်လာတော့ သူတို့ထဲက လူများစုကြီးက အစ္စလာမ်သာသနာကို ကူး ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ အစ္စလာမ်သာသနာကို မကူးပြောင်းဘဲ ကျန်နေခဲ့သူများကို မြန်မာကြီး လူမျိုးလို့ ခေါ်နေပါ တယ်။ (ရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ မာရ်မာကီး- ဆိုတာ မြန်မာကြီး ဆိုတဲ့ စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။) အဲ့ဒီ မြန်မာကြီး ဆိုတဲ့ စကားက မြန်မာတို့ထက် ရှေ့ကျသော၊ ရှေ့အကျဆုံးသော မြန်မာလူမျိုး လို့ အဓိပ္ပါယ်ကို ပေးကြောင်း- ရခိုင်သမိုင်းပညာရှင်တိုင်း လက်ခံထားပြီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို ရှေးဟောင်း မာဂဓ အင်ပါယာသုံး ဘန်ဂါလီ စကားကို ပြောဆိုတဲ့ လူမျိုးထဲက ဗုဒ္ဓဘာသာ အဖြစ်ကျန်နေ သူကို မြန်မာကြီး (မြန်မာတို့ထက် ရှေ့ကျသော လူမျိုး)လို့ အသိအမှတ်ပြုထားပြီး-၊ အဲ့ဒီ ဘာသာစကား၊ အဲ့ဒီ ရုပ်ရည်၊ အဲ့ဒီ ယဉ်ကျေးမှုအတိုင်း လုံးဝမလွဲတဲ့ လူတစ်မျိုးတည်း လူမျိုးစုက အစ္စလာမ်ကိုးကွယ်လိုက်တော့မှ မြန်မာတို့ထက် အလွန့်အလွန် နောက်ကျပြီး- ဟိုတစ်နေ့ကမှ မြန်မာနိုင်ငံထဲကို ရောက်လာသလို စွပ်စွဲနေခြင်း ဟာ လူမျိုးနဲ့ ဘာသာ မှားယွင်းနေခြင်း သို့မဟုတ် ဘာသာရေးအရ ခွဲခြားခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားနေပါ တယ်။
အခုအချိန်မှာ ဘယ်လိုမှ လိမ်လို့ မရနိုင်တော့ပါ။ လိမ်လေ အရှက်ကွဲလေ ဖြေရှင်းရခက်လေ ဘ၀ကို မြန်မာ ပညာရှင်ခံယူထားသူတွေ ကြုံလာရပါတော့မယ်။ မျက်ကန်း အမျိုးသားရေးဝါဒီတွေ ဘာသာရေး အစွန်းရောက် တွေ ဘေးကြုံရမယ့် ကာလကို ရောက်လာပါတယ်။
မြန်မာကြီးနဲ့ ရိုဟင်ဂျာ- အပြန်အလှန် ဆင်ခြင်ကြည့်ပါ။ အကယ်၍ ရိုဟင်ဂျာ တစ်ဦးက ဒီနေ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကူး ပြောင်းသွားမယ် ဆိုရင်- သူဟာ ဒီနေ့ချင်းပဲ မြန်မာတို့ထက် ရှေးကျတဲ့ "မြန်မာကြီး" လူမျိုး ဖြစ်သွားမယ်။ အဲ့ဒီ မြန်မာတို့ထက် ရှေ့ကျတဲ့ မြန်မာကြီး (မာရ်မာကီး) လူမျိုးတစ်ဦးက ဒီနေ့ပဲ အစ္စလာမ်သာသနာကို ကူးပြောင်း လိုက်မယ် ဆိုရင် သူဟာ မနေ့ကမှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ရောက်လာတဲ့ ကျူးကျော်သူ တစ်ဦး အဖြစ် ဖြစ်သွားမယ်။ ဒီလိုခံယူနေမှု- ခံစားနေမှုဟာ ပကတိ အမှန်တရား ဖြစ်ပါသလား။ လူတစ်ဦးတည်းမှာကိုယ် ဗုဒ္ဓဘာသာ နဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာ ဆိုတဲ့ ခံယူမှု တစ်ခုအရ- သူဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ရင် သူ့ကို အသက် ၁၀၀၀ ကျော် (မြန်မာ နိုင်ငံ မထူထောင်မှီကာလ) လို့ သတ်မှတ်ပြီး၊ အစ္စလာမ်ကို ကိုးကွယ်ရင် သူဟာ မနေ့ကမှ မွေးတဲ့ ပုခက်ထဲက ကလေးလို့ သတ်မှတ်လိုက် သလို ဖြစ်နေပါတော့တယ်။
ဒါဆိုရင် ဒီနေ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ဘင်္ဂလီ လို့ စွပ်စွဲနေတာ၊ လူကြောင့်လား၊ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာကြောင့်လား- ဆိုတာ ပညာရှင်များ ဆင်ခြင်တတ်မှာပါ။—။
ဘယ်လိုဆင်ခြင် ဆင်ခြင်၊ ဘယ်လိုငြင်းငြင်း–"ရိုဟင်ဂျာ"ကတော့ ရိုဟင်ဂျာပါပဲ။ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို မုန်းတီး လွန်းတယ် ဆိုရင်လည်း—၊ "ရှေးဟောင်းမြန်မာ" လူမျိုးလို့သာ အမည်ပေးဘို့ ဖြစ်နေပြီ။
Articles by Raja Petra Kamarudin:
'Carpetman' linked to Altantuya trial tells all to Harakahdaily
Posted: 27 Nov 2012 10:30 PM PST
1. Always beautiful and cheerful - Could have married movie star but wanted only you.
2. Hair that never needs curlers or beauty shops.
3. Beauty that won't run inarainstorm.
4. Never sick - just allergic to jewelry and fur coats.
5. Insists that moving the furniture by herself is good for her figure.
6. Expert in cooking, cleaning, fixing the car or TV, mixing drinks, painting the house and keeping quiet.
7. Favorite hobbies: Mowing the lawn and shoveling the snow. Hates charge plates.
8. Her favorite expression "What can I do for you, dear?"
9. Thinks you have Einstein's brains but look like Mr. America.
10. Wishes you would go play poker with the boys so she could get some sewing done. Loves you because you're SO-O-O Sexy.
1. She speaks 140 wordsaminute with gusts up to 180.
2. She once wasamodel foratotem pole.
3. A light eater - As soon as it gets light she starts eating.
4. Where there's smoke, there she is - cooking.
5. She lets you know you only have two faults - everything you say and everything you do.
6. Her hair looks like an explosion inasteel wool factory.
7. The last time she usedabroom was to fly somewhere.
8. If you get lost, open your wallet - she'll find you.
9. She fights with the neighbors just to keep in practice until you get home.
Posted: 28 Nov 2012 02:32 AM PST
ရခိုင်ပြယ်နယ်ကျောက်တော်မြို့တွင်လုပ်ရှားနေသောရခိုင်အကြမ်းဖက်သမားများ(၇ခိုင် အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်)၁၇ကိုလက်နက်မျိုးစုံ၁၈လက်နှင့်အတူ ဖမ်းဆီးထားကြောင်း
သိရှိရသည်။ကျောက်တော်မြိုနယ်တွင် မူစလင်ရွာ(၅)၇ွာ-အိမ်ခြေ(၆၀၀)ကို၇ခိုင်အကြမ်းဖက်သမားများက မီးရိူးခဲ့၇ာ လူ(၅၀၀၀)ကျော်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီး မွတ်စလင်(၂၀)အသတ်ခံခဲ့ရသည်။
ယင်းအနက်၂မှာအရှင်လတ်လတ်ခံခဲ၇ခြင်းဖြစ်သည်။ ရခိုင်ပြယ်နယ် အရေးအခင်တွင်
၇မလ(၇ခိုင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ေ၇းတပ်) အဖွဲ့ဝင် များက လုံထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့
၀တ်စုံကို ၀တ်စင်ပြီး မွတ်စလင်များကို တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။လုံထိန်းတပ်ဖွဲ့
နှင့် ရမလ တို့နားလည်မူ့ယူပြီး ပူးပေါင်းလုပ်ကြံခြင်းဖြစ်သည်။ RNDPပါတီက
၇ခိုင်အကြမ်းဖက် သမားများကို သူတို့ရေးဆွဲထားသော မဟာဗျုဟာအတိုင်း
မမှန်ကတင်းများကို စစ်တွေမြို့တွင် RNDP ပြယ်နယ်အဖွဲ့ဝင်
ဦးအောင်မြတ်ကျော် မှထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၇ခိုင်ပြယ်နယ်အသီးသီးရှိ
အိုးမဲ့အိမ်မဲ့အဖြစ်ေ၇ာက်အောင် စီမံနေကြသည်။ စစ်တွေမြိုတွင်မူစလင်များကို
အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ပြီး ဗလီများနှင့် အိုးအိမ်များကို
ဦးကာလူရှေနှင့် ဦးအောင်မြတ်ကျော်တို့ ကိုယ်တိုင်
၁၉၆၈ခုနှစ် စစ်တွေမြီုတွင် ဆန်ပြသနာဖြစ်ပွားစဉ်က ရခိုင်လူမျိူးများနှင့်
မူစလင်လူမျိုးများစွာ အသတ်ခံခဲ့ရသည်။စစ်တွေမြို့ရှိ ဆတ်ရိုကျ ချောင်းမှာ
ယင်းဖြစ်၇ပ်ကို အကြောင်းပြုရ်ျ "14 August Never Forget"ဟူ၇်ျ
၇ခိုင်လူမျိုးများအကြား မပျောက်ပျက် နိုင်သောနာကျည်းဖွယ်၇ာ
သမိုင်းဖြစ်၇ပ် တခုအဖြစ်ကျန်ခဲ့သည်။ယခု၇ခိုင်ပြည်နယ် အေ၇းအခင်းကာလတွင်
ကိုယ်တိုင် မြေတူးစက်များ၊မီးသတ်ကားများ စီစဉ်ပေးခဲ့သည်။ဦးလှမောင်တင်မှာ
သူတော်ကောင်း အယောင်ဆောင်နေသည်ကိုတွေ့၇သည်။ အမှန်မှာ
၇ခိုင်ပြည်နယ်အေ၇းခင်းဧ။် အဒီကမဟာဗျုဟာကိုRNDP လူမျိုးတုန်း(genocide)
သုတ်သင် သတ်ဖြတ်ပြီး ၇ခိုင်ပြယ်နယ်ကို ၇ခိုင်လူမျိုးများဧ။်
စိတ်ကူးယဉ်အိမ်မက်ဖြစ်သော ၇ခိုင်ပြည်သူ့ သမတနိုင်ငံကို ၂၀၁၂ သြဂုတ်လ
၁၄၇က်နေ့တွင် ကြော်ငြာရန်ဖြစ်သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ
အောက်ပါအတိုင်းလျှောက်ထားကြောင်း သိရှိရသည်။ နှိင်ငံနယ်နမိတ်
။။ဦးကျော်မောင် ဗိုလ်မူး(ငြိမ်း) သမတ
။။ဦးအေးမောင် လွတ်တော် အမတ်၊၀န်ကြီးချုပ်
။။ဦးအေးသာအောင် ၇ခိုင် NLD နိုင်ငံရေးဝန်းကြီး
။။ဦးလှမောင်တင် ၇ခိုင်ဝန်ကြီချုပ် ကာကွယ်ေ၇းဝန်ကြီး
From FB of Tearswhy Andme
Posted: 27 Nov 2012 09:47 PM PST
Posted: 28 Nov 2012 12:43 AM PST
" ကျွန်မတို့ ဒီနောက်ဆုံးအပိုင်းကို အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ကျော်လွှားနိုင်မယ်ဆိုယင် နောင်လာမယ့် ကျွန်မတို့ မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ တကယ့်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့၊ တကယ့်ကို လုံခြုံတဲ့၊ တကယ့်ကို လွတ်လပ်တဲ့ ၊ တကယ့်ကို တိုးတက်တဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီး ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မ ယုံကြည်ပါတယ် "
အမေစုအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးအရ စကားလုံးလှလှ အသုံးပြုသွားသော်လည်း ၄င်းစကား၏ နောက်ကွယ်၌ မြုပ်ကွက်လေးရှိ နေသလိုလို ခံစားလိုက်ရပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မကြာသေးမီက " ရခိုင်ပဋိပက္ခဟာ ဘာသာရေးနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်း " ဟု အမေစုမှ အတိအကျ ထုတ်ဖော် ပြောကြားသွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ မီဒီယာပေါင်းစုံမှ တစ်ဖက်စောင်းနင်း သတင်းဖော်ပြချက်တွင် ပါဝင်နေသော ဘင်္ဂါလီ၊ ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စ၏ ဘောင် အပြင်ဖက်သို့ မိုင်ပေါင်းများစွာ ခရီးကျွံလာပြီး အစ္စလာမ် ဘာသာ နှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်(မုစ်လင်မ်)များအပေါ် ပေါက်လွှတ်ပဲစား အမြင်ထားရှိနေမှုများ/ ဆက်ဆံနေမှုများမှာ လက်တွေ့အခြေအနေအရ ငြင်း မရအောင် တွေ့နေရပြီဖြစ်ပါသည်။
ပန်းတိုင်မရောက်သေးသောအမေစု - လမ်းကြောင်းချော်ထွက်လေရော့သလား ?
Posted: 28 Nov 2012 12:25 AM PST
Photos from the Hello Kitty Forever Launch Party at the Forever 21 Shibuya Store in Tokyo, Japan, earlier this month. Either the photographer was avoiding the crowd on purpose (for privacy sake), or it'sarather quiet launch party. The piece on Hello Kitty looks cute though. Image via the American fashion retailer's official blog…
Hello Kitty x Forever 21 from YeinJee's Asian Journal
Posted: 27 Nov 2012 11:21 PM PST
"Sehingga kini kita masih menunggu perkembangan dari pihak Kedutaan Besar Indonesia.
"Jingga 13 merasakan kes ini perlu disiasat kerana ia melibatkan kepimpinan tertinggi negara," katanya ketika dihubungi.
"Robengah sendiri menyatakan beliau diberi amaran oleh orang besar di Malaysia yang melarang beliau daripada membicarakan perkara ini," tegas Fariz.